Wednesday June 06, 2018 - 06:48:06 in Wararka by Super Admin
Markii Ugu horraysay dowladda Itoobiya ayaa ku dhawaaqday in ay diyaar u tahay wadahadal ay lagasho Ereteria oo dagaal waqti dheer qaatay uu ku dhaxmaray bariga qaaradda Afrika.
War rasmi ah oo kasoo baxay R/wasaaraha xabashida Abeey Axmed ayaa lagu sheegay in ay baaq nabadeed ufidinayaan dowladda Eereteria si loosoo gaba gabeeyo colaadda daba dheeratay ee labada dal u dhaxaysa.
Fitsum Arega oo ah madaxa xafiiska R/wasaaraha Itoobiya ayaa warbaahinta u sheegay in xukuumadda Cusub ee Addis Ababa ay wax ka bedelayso siyaasaddii ay kula dhaqmi jirtay dariskeeda ayna ugacan haatinayaan Asmara.
"Itoobiya iyo Eritrea waxay leeyihiin xiriir soo jireen taariikhi ah waxaana ugu muhiimsan dhanka dhaqanka iyo dhiigga. Dhibaatada labada dhinac kasoo gaartay colaadda waa wax aan laqiyaasi karin geeddi socodka nabaddu waa la bakhtiiyay taas waa in ay isbedeshaa, oo hadda Itoobiya waxay ku baaqeysaa wadahadal dhab ah" sidaas waxaa yiri Fitsum Arega.
Labada dowladood ayay dagaallo ka dhax qarxeen sanadihii 1998 iyo 2000 waxaana dagaalka ku dhintay Kumanaan kun oo askari.
Dhinaca kale baarlamaanka Xabashida Itoobiya ayaa qaaday xukunkii xaaladda degdegga ahaa ee wadanka lagusoo rogay sedax bilood ka hor, kulan ka dhacay magaalada Addis Ababa ayuu baarlamaanku sidaas ku go'aamiyay.
Kooxaha mucaaradka dibad joogga ah ayaa tallaabadan ku tilmaamay isku day kale oo Taliska Addis Ababa ku doonay in uu ku damiyo kacdoonka shacbiga ah ee sanaddii sedaxaad ka socda wadankaasi.
40 Askari Itoobiyaan ah oo dhimasho iyo dhaawac ku Noqday Qarax lagula beegsaday gobolka Gedo.